China tsika yemadzimai matatu-yakasanganiswa 50% polyester 25% donje 25% rayon racerback yakasununguka yakakodzera tangi misoro ine logo muhuwandu fekitori uye vagadziri | Chiono
tsika yevakadzi vatatu-musanganiswa 50% polyester 25% donje 25% rayon racerback yakasununguka yakakodzera tangi misoro ine logo muhuwandu
Aya madzimai eTri-Blend Racerback Tank anorova ese akakodzera maitiro: matatu - musanganiswa, racerback, uye inofadza inoteerera inoyerera. Ultra-lightweight, iyi fashoni-yekumberi tangi ndiyo sarudzo yakasarudzika yechiitiko chinotevera cheboka rako.
1.Ava vakadzi Tri-Blend Racerback Tank inorova ese akakodzera maitiro: tri-musanganiswa, racerback, uye inofadza inoteerera inoenderana. Ultra-lightweight, iyi fashoni-yekumberi tangi ndiyo sarudzo yakasarudzika yechiitiko chinotevera cheboka rako.
2.Izi tsika zvemijaho ye racerback ndiwo muenzaniso wekunyaradza kusinganetsi. Iyo yakatetepa yakarukwa zvinhu ingori gobvu zvakakwana zvekuti haufanire kupfeka kamu navo, asi ivo vanogona kuturikwa kana zvichikuita kuti uve wakasununguka. Nekuti hembe iyi ndeyekuti iwe ugare wakasununguka.
Pashure: mashandiro emitambo bra
Zvadaro: Oem kudhinda bani rakashambidzwa rakapfava kutenderera mutsipa rakatetepa vakadzi vatatu-musanganiswa yakakosha tshirt
combed yekotoni tshirt
donje t hembe
polyester t hembe
pachena tsika Logo nemvere pinki donhwe papfudzi cro ...
mashandiro emitambo bra
Wholesale breathable polyester Marathon tsika ...
tsika chidzitiro anodhinda bani hapana muchiso nyoro varume bas ...